Pigment Yero 191 ihwo hupfu hweyero inopenya, ine yakanaka yekudzivirira kupisa uye kuita kwakanakisa kwechiedza.
Kurudzira PVC, RUB, PE, PP, EVA, PS etc.
Unogona kutarisa TDS yePigment Yellow 191 pazasi.
Pigment Yero 191:1 / CAS 154946-66-4
Pigment Yero 191:1 ipfudze yero inopenya, ine tsvuku tsvuku.Iyo ine yakanaka kupisa kusagadzikana uye yakanakisa mwenje kuita.
Chinhu chakakosha chinotsiva benzidine yero uye chrome yero.
PY191: 1 inokurudzirwa PVC, RUB, PE, PP, EVA, PS, ABS, PA uye fiber coloring etc.
Pigment Yellow 183 iruvara rutsvuku rweyero.Iyo ine yakanaka yekudzivirira kupisa uye kukurumidza kukurumidza, yakanaka kusamira kutama uye yakakwira tinting simba ine yakafara application.Yakakurudzirwa zvikuru yePP, PE, PVC etc. Inobvumirwawo kushandiswa kweinjiniya mapurasitiki.Tinogona kupa Pigment Yero 183 SPC uye mono-masterbatch.Ndokumbira utarise TDS pazasi.
Pigment Yero 181 / CAS 74441-05-7
Pigment Yellow 181 iruvara rutsvuku rweyero.
Iyo ine yakanakisa kupisa kupisa uye kukurumidza kukurumidza, yakanaka kusimuka kuramba uye yakakwirira tinting simba ine yakakura application.
Yakakurudzirwa zvikuru yePP, PE, PVC etc. Inobvumirwawo kushandiswa kweinjiniya mapurasitiki.
Tinogona kupa Pigment Yero 181 SPC uye mono-masterbatch.
Ndokumbira utarise TDS yePigment Yellow 181 pazasi.
Pigment Yellow 180 ipfumbu yakasvibirira yero, ine kugona-kupararira kugona, yakanakisa kupisa kupisa, kupenya kwakanaka uye kusimba kwemavara.Inoshandiswa seyakajairwa yepakati yero ruvara.
Kuenzana kwayo inokurumidza yellow HG, Novoperm yellow P-HG, iyo inobvumirwa kushandiswa muPP, PE, ABS, PVC, mapurasitiki, kudhinda uye kuvhara, BCF yarn uye PP fiber.
Isu tinopawo Pigment Yero 180 SPC uye mono-masterbatch.
Unogona kutarisa TDS yePigment Yellow 180 pazasi.
Pigment Yero 168 / CAS 71832-85-4
Pigment Yellow 168 ihupfu yakasvibirira yero, ine yakanaka inodzivirira kupisa uye yakanakisa mwenje kuita, yakapararira zviri nyore, inokurudzirwa yePP&PE plastiki, zvakare yakanangidzirwa PVC, RUB, EVA nezvimwe.
Pigment Yero 155 ihwo hupfu hweyero inopenya, ine kunaka kwekupisa kupisa uye kuita kwakanakisa kwechiedza.
Yakashandiswa kutsiva Dichlorobenzidine yero inosanganisira PY12,PY13,PY14,PY17,PY81 nezvimwe.
Inokurudzira PVC, RUB, PE, PP, EVA, PS.Inonyanya kushandiswa muPP fiber.
Unogona kutarisa TDS yePigment Yero 155 pazasi.
Pigment Yero 154 igirini yero pigment poda, ine yakakwira ruvara simba uye yakanakisa kugadzirisa kugadzikana, yakanakisa kupisa kupisa uye kukurumidza kukurumidza, semi-pachena.
Kurudzira PVC, PU, ​​RUB, PE, PP, Fiber, EVA, PS, pendi yekushongedza, pendi yeindasitiri, poda coil, coil coil.
Unogona kutarisa TDS yePigment Yellow 154 pazasi.
Pigment Yero 151 igirini yakasvibira yero pigment poda, ine yakakwira ruvara simba uye yakanakisa kugadzirisa kugadzikana, yakanakisa kupisa kupisa uye kukurumidza kukurumidza, semi-pachena.
Unogona kutarisa TDS yePigment Yellow 151 pazasi.
Pigment Yellow 150 ipfumbu yakasvibirira yero, ine nyore-kupararira kugona, yakanakisa kupisa kupisa, kupenya kwakanaka uye kusimba kwemavara.Inoshandiswa seyakajairwa yepakati yero ruvara.
Inobvumirwa kushandiswa muPP, PE, ABS, PVC, PA, mapurasitiki, kudhinda uye kupfeka, BCF yarn uye PP fiber.
Isu tinopawo Pigment Yero 150 SPC uye mono-masterbatch.
Unogona kutarisa TDS yePigment Yellow 150 pazasi.
Pigment Yero 147 / CAS 4118-16-5
Pigment Yero 147 inopenya yero pigment poda, ine yakanakisa kugadzirisa kugadzikana, kujeka kwepamusoro, yakanakisa kupisa kupisa uye kukurumidza kukurumidza.
Kurudzira: PS, ABS, PC, Fiber, etc. Polyester faibha yemotokari machira, zvipfeko, zvemukati machira.
Unogona kutarisa TDS yePigment Yellow 147 pazasi.
Pigment Yero 139 / CAS 36888-99-0
Pigment Yero 139 ihupfu yakatsvuka yero pigment, ine yakanakisa kugadzirisa kugadzikana, kujeka kwepamusoro, kwakanakisa kupisa kupisa uye kukurumidza kukurumidza.Kupisa kwekudzivirira muHDPE kunogona kuita 250 ℃, asi ichaparara pasi petembiricha yakakwira kupfuura 250 ℃.Inoratidza kumira zvakanaka kuramba muPVC inoshanduka.Uye inogona kuve yakanakisa kutsiva yePigment Yellow 83.
Iyo yakaenzana ndeye YELLOW K1841, Novoperm Yellow M2R, YELLOW L2140, YELLOW H1R, iyo inobvumirwa kushandiswa muPP, PE, ABS, PVC, mapurasitiki, kudhinda uye kuvhara, BCF yarn uye PP fiber.
Isu tinopawo Pigment Yero 139 SPC uye mono-masterbatch.